दुई खर्बभन्दा बढीको चिनियाँ सामग्रीमा नयाँ कर लागू, अमेरिकाले व्यापार युद्ध चाहेको चीनको चेतावनी - ग्लोबल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
दुई खर्बभन्दा बढीको चिनियाँ सामग्रीमा नयाँ कर लागू, अमेरिकाले व्यापार युद्ध चाहेको चीनको चेतावनी
अमेरिकाले चीनका २ खर्ब डलरभन्दा माथिका सामग्रीमा सोमबारदेखि पूर्व घोषित कर लागू गरेको छ। अमेरिकाले चीनबाट आयात भएका सामग्रीमा सोमबार बेइजिङको मध्यान्न समयदेखि कर लागू गरेको हो।
कर लागू गरेसँगै अमेरिकाले चीनको अनुचित र अस्वस्थ व्यापार व्यवहारका कारण आफूले उसमाथि कर लगाएको जानकारी दिएको छ।
गत हप्ता नै अमेरिकाले कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले अमेरिकाबाट आयात हुने ६० अर्ब डलरका सामग्रीमा कर लगाउने बताइसकेको छ। चीनले अमेरिकाले आफूसँग ठूलो व्यापार युद्ध सुरु गरेको बताएको छ।
सोमबार के हुँदैछ?
अमेरिकी कम्पनी जसले चिनियाँ सामग्री आयात गर्छन् उनीहरुमाथि सोमबार देखिनै १० प्रतिशत लेवी लाग्नेछ। चीनबाट आयात हुने ६ हजारभन्दा बढी सामग्रीमा कर लाग्नेछ। जसमा हाते झोला, चामल, लुगा, स्मार्ट वाच, कुर्चीहरु पर्छन्।
सन् २०१९ को सुरुवातसँगै फेरी अमेरिकाले उक्त सामग्रीहरुमा २५ प्रतिशतले कर बढाउने छ। चीनले भने अमेरिकी साना विमानहरु, कम्प्यूटर, लुगाफाटाको आयातमा ५ प्रतिशतले कर बढाउने छ।
यस्तै चीनले केमिकल, मासु, वाइन, तथा गहुका सामग्रीमा १० प्रतिशतले कर बढाउनेछ।
यस वर्ष तीनपटक भन्सार शुल्क बढ्यो
यसपटकको कर वृद्धिसँगै अमेरिकाले चीनमाथि ३ पटक भन्सार शुल्क तथा कर बढाएको छ। गत जुलाइमा ५० अर्ब डलरको सामग्रीमा २५ प्रतिशत कर बढाएको अमेरिकाले गत महिनामात्र चीनका १६ अर्बका सामग्रीमा २५ प्रतिशत कर बढाएको थियो।
अमेरिकाले यसैवर्ष चीनमाथि अर्को चरणको कर वृद्धिगर्ने समेत चेतावनी दिएको छ। चीनले अमेरिकासँगको व्यापार युद्धमा गतिलो प्रतिक्रिया जनाउने बताएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले अमेरिकाविरुद्ध अस्वस्थ व्यापार व्यवहार गरेका कारण आफू चीनमाथि कर लगाउन बाध्य भएको बताएका छन्। अमेरिकी प्रविधि तथा बौद्धिक सम्पत्ती चीनले अवैध रुपमा भित्राएर प्रयोग गरेको अमेरिकी आरोप रहेको छ।
गत महिना चीन र अमेरिकी प्रतिनिधि व्यापार युद्ध टुंगाउने छलफलमा जुटेका थिए। तर त्यो प्रयास असफल भएको थियो। एजेन्सी
प्रकाशित ८ असोज २०७५, सोमबार | 2018-09-24 14:35:20
भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री र अमेरिकी अधिकारीबीच भेटवार्ता, के के भयो सहमति?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका विषयमा भेनेजुएलाका वरिष्ट अधिकारीसँग भेटवार्ता भएको जनाएको छ।
प्रसिद्ध बंगाली गायक प्रतीक चौधरीको निधन
बंगाली गायक प्रतीक चौधरीको ५५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मंगलबार हृदय घातका कारण उनको निधन भएको हो।
आगलागीमा परी एकै परिवारका ७ बालबालिकाको मृत्यु
उत्तर अमेरिकी देश क्यानडामा आगलागीमा परी ७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।
भारतमा डेढ महिनामै स्वाइन फ्ल्युबाट ३७७ को मृत्यु, १२ हजार विरामी
भारतमा डेढ महिनामै १२ हजारभन्दा बढी स्वाइन फ्ल्युका बिरामी भेटिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनः बर्नी स्यान्डर्सले गरे उम्मेदवारीको घोषणा
अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन्।
दार्जिलिङको शिव मन्दिर परिसरमा नेपाली महिलाको शव फेला
दार्जिलिङको सिलगढी नजिक शिव मन्दिर इलाकामा नेपाली नागरिक वृद्धाको शव फेला परेको छ।